Ahoana ny fisafidianana bisikileta enta-mavesatra-News & Events-Transit Delight (Changzhou) Ebike Co., LTD
Ahoana ny fisafidianana bisikileta mitondra entana mety
Fotoana: 2021-03-23 Hits: 20
Ny bisikileta dia tsy fantatra amin'ny fitondrana zavatra mavesatra, fa ny bisikileta mpitondra entana no mitondra. Raha te hitondra ny zanakao avy amin'ny Point A ka hatramin'ny Point B ianao, fa tsy afaka mametraka azy ireo amin'ny bisikiletanao mahazatra, dia misy safidy maro hanampy anao. Mba hahazoana entana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa, dia mendrika tokoa ny mandinika bisikileta mpitondra entana.
Misy karazana cargobike maro samihafa. Amin'ny ankapobeny dia misy rambony lava, basikety telo, karazana bisikileta telo hafa, ary "minivan." Samy manana ny tsena samihafa izy ireo ary samy hafa ny vidiny. Bisikileta maro izao no azo omena safidy elektrika manampy anao ho mora mitaingina ny fiantsenana isan-kerinandro.
Mety ho hendry ihany koa ny misafidy maodely iray, izay misy ny fiara fitaterana tena miasa rehetra: vodin-damosina, fender, boaty rojo, fanala sns, ho sarotra. Ny vaninao dia ho mafy, ka misafidiana ampahany tsara kalitao. ary ny freins dia tokony harovana tsara amin'ireo lafin-javatra ireo, ary ny endriny ambany dia hanamora ny fidinana sy ny fidinana rehefa entina.
Fa aloha, mila mamaritra izay entinao ianao: zaza kely dia kely? Zaza kely? Ankizy antitra? Olon-dehibe hafa? Sa entana? Karazan-javatra inona? Ka mandra-pahoviana ny dia ataonao? Fotoanan'ny fotony ve ianao? Te hihazona ny hafainganam-pandeha sy ny fivezivezena ve ianao, na te bisikileta manana fahaiza-manao bebe kokoa nefa angamba miadana kely?
Tena zava-dehibe ny mieritreritra hoe aiza no hametrahanao azy ary manana hevitra tsara momba ny teti-bolanao farany ambony ary tadidio ny fiheverana ny vidin'ny kojakoja toy ny canopy, seza ankizy ary hidin-trano avo lenta.
Ny torohevitra tsara indrindra dia ny manandrana karazana vitsivitsy, jereo ny zavatra tsapan'izy ireo aminao, ary zahao ny habetsaky ny fahaizan'izy ireo. Jereo ny fetran'ny lanjany, ao anatin'izany ny mpandeha sy ny fiara, ary ny entana raha manana namana na mpifanila vodirindrina manana ianao dia izay idealy: andramo ny azy ireo ary anontanio izy ireo ny zavatra niainany. Mitadiava zavatra izay manamora ny fiainanao, toy ny fefy ambany, fonosana mifangaro ary kojakoja namboarina mifanaraka amin'izay ilainao.
Ho hitanao fa na vanim-potoana inona no safidinao dia hanatsara ny fiainanao izany.
PREV: Maninona no misafidy bisikileta elektrika OTKARGO
MANARAKA : Karazana azo itokisana-tany am-boalohany